(နေကာဟ်) ထိမ်းမြားခြင်း။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
(နေကာဟ်)ထိမ်းမြားခြင်းဟူသည် သေတစ်ဖန်သက်တစ်ဆုံး ရိုးမြေကျပေါင်းသင်းမည်ဟု အရှင့်ထံတိုင်တည် ၍ ခုံသမာဓိများနှင့်သက်သေများရှေ့တွင် သစ္စာဆို ခြင်းဖြစ်သည်) ၄း၂၁။
(နေကာဟ်)ဟူသောအရဗီဝေါဟာရမှာ အရဗ်များ၏နေ့စဉ်သုံစွဲလျှက်ရှိသော ဝေါဟာရဖြစ် သည့်ကမ္ဘာမြေ ပေါ် သို့မိုးရွာချခြင်းကို (နကဟလ်-မသ်ွရွလ်-အရ်ဒွ) မိုးရေနှင့်အမ္ဘာမြေ ကြီးပေါင်း ဖက်ခြင်းဆိုသောစကားမှဆင်းသက် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ မိုးရွာ ချသောအခါ မိုးရေသည် ခြောက်သွေ့လျှက်ရှိသောမြေဆီလွှာထဲသို့ စိမ့် ၀င်ခိုအောင်း သွားပြီးမြေသားအားပွမွနူးညံ့အောင်ဓါတုပြောင်းလဲစေသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့်မျိုးကောင်းမျိုး သန့်ပေါက် ပင်စိုက်ပင်များနှင့်ပန်းပင်များကို အစီအရီပေါက်ရောက် ဖူးပွင့်ရှင်သန်ခြင်း ကို (နေကာဟ်) ဟုခေါ်သည်။လော ကမြေပြင်တစ်ခွင်လုံး စိမ်းစိမ်းစိုစို၊ စည်စည်ကားကား ဖြစ်နေမည့်လူ့လောကသည် မျက်စေ့ပသာရ ကြည်နူးဖွယ် ရာ စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ပြီး ဖရဏာပီတိ ဂွမ်းဆီထိသကဲ့သို့ ဖြစ်နေရန် ရည် ရွယ်၏။ ယင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ရရှိရန် တစ်မိသားနှင့် အ ခြားတစ်မိသားတို့ (နေကာဟ်)ပေါင်းဖက်ရန် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန် က လမ်းညွှန်ခြင်းဖြစ် သည်။
လူတိုင်းညစဉ် တွေ့ကြုံခံစားနေရသည့် ဘ၀လက်တစ်ကမ်းမှ အခြားသာဓကတစ်ရပ်မှာ(နကဟာန်-နု အား ဆုလ်-အိုင်းန)ငိုက်မြည်းခြင်းနှင့် မျက်လုံးတို့ပေါင်းဖက်ခြင်းကိုလည်း နေကာဟ် ဟူသောဝေါဟာရကို သုံးစွဲ သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ငိုက်မြည်းခြင်းသည် မျက် လုံးနှင့်ထိတွေ့ ပေါင်းဖက်စုံမက် စိမ့်ဝင်သွားရန်လို အပ်၏။ သို့မှ သာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်တစ်ဝကြီး အိပ်စက်အနားယူလိုက်ရသဖြင့်တစ်နေကုန်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကျန်း မာပြည့်ဖြိုး အင် အားတိုးပြီး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့နေမည်။
လူ့ဘ၀လုပ်ငန်းဆောင်တာအ၀၀ကို စံချိန်စံညွှန်းမှီထမ်းဆောင်ရင်း လူ့ဘ၀၏အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ ခံစားရယူနှိုင်မည့် အခြအနေသည်လည်း (နေကာဟ်)၏ ရည်ရွယ်ချက် ကိုဖေါ်ပြနေ၏။ အိပ်ချိန်ရောက် ပါ လျှက် မအိပ်နှိုင်မငိုက်မြည်းပဲ၊ မျက်လုံးများကြောင်လျှက် အိပ်ရာပေါ် တွင်လူးလွန့်လျှက်၊ ကိုယ်ဒုက္ခ၊စိတ်ဒုက္ခ ဖိစီးမှု ကို အလူးအလဲခံစားရင်း မိုးစင်စင်လင်းသွားရ သူများ ၏ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါအန္တရာယ်များကား ဘ၀၏အနိဌာရုံ များပင်ဖြစ် ၏။ (နေ ကာဟ်)၏ဆန့်ကျင်ဖက် ဆိုးကျိုးများသည်လည်း အလား တူပင်ဖြစ်၏။ ထိုအဖြစ် မျိုးကိုမည် သူမျှ လိုလားကြ မည် မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကလူ့ဘ၀သက်တမ်းတွင်(နေကာဟ်)၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အရေးကြီးပုံကို လူတို့၏နေ့စဉ်လက်တစ်ကမ်းမှအဓိပ္ပါယ်ရှိရှိရည် ရွယ်ချက်ပါပါသုံးစွဲလျှက် ရှိနေသော ကိစ္စရပ်များဖြင့် ယှဉ် တွဲဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာ(နေကာဟ်)၏ ရည် ရွယ်ချက်၊ သဘောတရား၊ ဆိုလိုရင်းတို့ကို နားလည် သဘောပေါက်ပြီး လူ့ဘ၀အတွက် ရာသက်ပန် မရှိ မဖြစ်လို အပ် ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြာင်းကို ကွက် ကွက်ကွင်း ကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနှိုင်မည်ဖြစ်သည်။(မွဖ်သီဦးမြတ်သူ၏ကုရ်အာန်စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ ၁)
တုနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာအရှင်သည် လူ့အသိုက်အမြုံကြီးကို တည်ဆောက်ပေးရန် ရည်ရွယ် ချက်ရှိခဲ့သည့်အ တွက် တစ်မိသားစုမှမွေးဖွားလာသော အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အခြားတစ် မိသားစုမှမွေးဖွားသောအမျိုး သ္မီးတစ်ဦးကို(နေ ကာဟ်)ဟူသောအချစ်နှောင် ကြိုးဖြင့် ရစ်ပါတ်ချည်နှောင်မှုစနစ်ကြီးကို ဖန်တည်းပေး ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်စိမ်း အမျိုးသားတစ် ဦးနှင့် တစ်စိမ်းအမျိုး သ္မီး တစ်ဦးတို့သည် (နေကာဟ်)ဟူသော အချစ်နှောင်ကြိုးဖြင့် ရစ် ပါတ် ချည်နှောင်ခြင်း ခံလိုက်ကြရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း -၄င်းတို့ပင်မမြင်မတွေ့ ရသေးသော အနာဂတ်တွင် သန္ဓေ တည် လာမည့်ရင်သွေးများကိုပါ ကြိုတင်၍သံယော ဇဉ် နှောင်ကြိုး ရစ်ပတ်နှိုင်သော စွမ်းအားအပြည့် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကုရ်အာန်၃၀း၂၁ တွင်-
(ထာဝရအရှင်၏သက်သေလက္ခဏာများအနက်မှ တစ်ခုမှာငါအရှင်သည် အသင်တို့အဖို့အသင်တို့အနက် မှပင် ကြင်ဖက်များကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းသည် ထိုကြင်ဖက်များတွင်အသင်တို့၏ ကိုယ် စိတ်နှလုံးကိုတည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်အသင်တို့၏စပ်ကြားတွင် အချစ်နှင့်ဂရုဏာကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ သည်။ ဤသည် စဉ်း စားတွေးခေါ် တတ်သူများအဖို့ သက်သေ သာဓကများပင်ဖြစ်သည်။)
ဖန်ဆင်းရှင်သည် (နေကာဟ်)ဟူသော အချစ်နှင့်သံယောစဉ်မျိုးစေ့ကို လင်နှင့်မယား တို့၏ နှလုံးသည်း ပွတ်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးပေးလိုက်ရုံဖြင့်လင်နှင့်မယားနှစ်ဦးတို့၏ အချစ်မှ အလွန်အင်အားကြီး မားသော အချစ်စွမ်းအင်တစ်ခုမွေးဖွားပေါ်ထွန်းလာသည်။ ထိုလင်နှင့်မယားနှစ်ဦးတို့မှ ရှင်သန်မွေးဖွား လာသော အချစ်စွမ်း အင်သည် ၄င်း တို့နှစ်ဦးတည်း အတွက်တွင် မက မိမိတို့၏သားသမီးများအတွက်ပါ အ လွန်ကြီးမားခိုင် မာသော မဟာတံတိုင်းကြီးသဖွယ် ထုထည်ကြီးမားလှပေသည်။
ဤသည်ကိုကြီးမားလှသော (မိဘမေတ္တာ)ဟု ယေဘူယျခေါ်ဆိုကြသည်။ ထိုစနစ်ကြီးသည် ကမ္ဘာဦးစမှ တည်ရှိခဲ့ ရာ နောင်ကမ္ဘာကြီးဆက်လက် တည်ရှိနေသ၍ ရှိနေဦးမည်သာ။
This entry was posted on April 10, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Burma’s Rohingya Treatment Violates International Law
ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ)ဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူကိုရဲမင်းဦး အား အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ ရုံးထုတ် ရမန် ပေး →